က MP3 REMIX နောက်ဆုံးထွက်ဗားရှင်းကိုဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ - PROGRAM ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - 2019
က MP3 Remix 3,810
ကုန်အမှတ်တံဆိပ်နှင့် operating system ကိုကအပေါ်ပုဂ္ဂိုလ်ရေး data တွေကိုဆုံးရှုံးမပါဘဲ device ကို unlock / စကားဝှက်ကိုပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်အခွင့်အလမ်းပေးခဲ့ပါသည်။ သို့သော်အချို့မော်ဒယ်များရက်နေ့တွင်, ပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်အားကြောင့်ဒီဇိုင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ဆော့ဖ်ဝဲကို features တွေအခြားခုနှစ်ထက်ပိုမိုရှုပ်ထွေးဝင်ရောက်နေပါတယ်။
Method ကို 1: သော့ခတ် screen ပေါ်မှာအထူး link ကိုအသုံးပြုခြင်း
ထုတ်လုပ်သူများကကို Android operating system ကိုသို့မဟုတ်ယင်း၏ပြုပြင်မွမ်းမံအချို့ဗားရှင်းစာသားလင့်ခ်၏အထူးအမျိုးအစားလည်းမရှိ "access ကို Restore" သို့မဟုတ် "မေ့နေ password ကို / သော့ဖွင့်"။ ဒီ link / button ကိုအားလုံး devices များပေါ်တွင်ပေါ်လာပါဘူး, ဒါပေမယ့်ထိုသို့လျှင်, သင်ကသုံးနိုင်သည်။
သို့ရာတွင်ထိုသို့သင် (ကသင့်ရဲ့ Android ဖုန်းမှကြွလာလျှင်) ကို Google နှင့်အတူအကောင့်တစ်ခုမှတ်ပုံတင်ထားသည့်အီလက်ထရောနစ် box ကိုမှဝင်ရောက်ခွင့်ကို restore ရန်လိုအပ်ကြောင်းသတိရထိုက်သည်။ ဒီအကောင့်ကိုစမတ်ဖုန်း၏ပထမဦးဆုံးအလှည့်နေစဉ်အတွင်းဖြစ်ပေါ်ရသောမှတ်ပုံတင်ရေး, စဉ်အတွင်းနေသူများကဖန်တီး။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကြောင့် Google မှာရှိပြီးသားအကောင့်ကအသုံးပြုနိုင်ပါသည်။ ဤသည်ကိုအီးမေးလ် box ကို device ကို unlock မှထုတ်လုပ်သူရဲ့ညွှန်ကြားချက်ကနေလာရပေမည်။
ဖုန်းပေါ်မှာပါ။ သော့ခတ်မြင်ကွင်း, စာစောင်ကိုခလုတ်သို့မဟုတ် link ကိုတွင် "access ကို Restore" (စဟုခေါ်ဝေါ်ခြင်းကိုခံရနိုင်ပါစေ "လျှို").
သငျသညျအရာသင်ယခင်က Market က Google Play ကအတွက်အကောင့်ချည်ထားသောအီးမေးလ်လိပ်စာကိုထည့်သွင်းဖို့လိုအပ်ဘယ်မှာပွင့်လင်းသောလယ်။ တစ်ခါတစ်ရံအပြင်ဖို့ e-mail ကိုဖုန်းသင်ပထမဦးဆုံး start အခါသင်ဝင်သောမဆိုလုံခြုံရေးမေးခွန်းကိုဖို့တုန့်ပြန်ရန်တောင်းဆိုနိုင်ပါသည်။ အချို့ကိစ္စများတွင်အဖြေကို unlocked စမတ်ဖုန်းဖို့လုံလောက်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူကအစားတစ်ခုချွင်းချက်ဖြစ်ပါတယ်။
နောက်ထပ်ညွှန်ကြားချက်အဘို့သင့်သတ်မှတ်ထားတဲ့အီးမေးလ် access ကို restore ရောက်လိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်ကိုသုံးပါ။ ဒါဟာမိနစ်အနည်းငယ်သို့မဟုတ်နာရီပေါင်းများစွာ (တစ်ခါတစ်ရံရက်ပေါင်း) အဖြစ်လာနိုငျသညျ။
Method ကို 2: ထုတ်လုပ်သူနည်းပညာပံ့ပိုးမှုဆက်သွယ်
ဤနည်းလမ်းကိုအရင်တဦးတည်းမှအတန်ငယ်ဆင်တူသည်, ဒါပေမယ့်သူ့ကိုမတူဘဲ, သင်နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုနှင့်အတူဆက်သွယ်ပြောဆိုရန်နောက်ထပ်အီးမေးလ်ကိုသုံးနိုင်သည်။ သငျသညျ access ကို restore လုပ်ဖို့လိုအပ်သောသော့ခတ် screen ပေါ်မှာအထူးခလုတ်ကို / link ကိုရှိနေကြသည်မဟုတ်တဲ့အခါဒီနည်းလမ်းကိစ္စများတွင်သက်ဆိုင်သည်။
နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာပံ့ပိုးမှုညွှန်ကြားချက်နှင့်အတူဆက်ဆံရေးရုံးများအောက်ပါအတိုင်း (Samsung ရဲ့ထုတ်ကုန်များ၏ဥပမာစဉ်းစားကြည့်ပါ):
အဆိုပါ tab ကိုမှတ်ချက် "ပံ့ပိုးမှု"။ က Samsung က်ဘ်ဆိုက်၏ဖြစ်ရပ်မှာတော့သူမမျက်နှာပြင်ရဲ့ထိပ်ပိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်။ သည်အခြားထုတ်လုပ်သူများထံမှဆိုက်ကအောက်ခြေမှာရှိနိုင်ပါသည်။
က Samsung က်ဘ်ဆိုက်တွင်, သင် cursor ပျံဝဲလျှင်ရန် "ပံ့ပိုးမှု"ထို့နောက်တစ်ဦးအပိုဆောင်း menu ကပေါ်လာလိမ့်မည်။ သငျသညျဖြစ်စေရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်တဲ့ထောက်ခံမှုအဖွဲ့ကိုဆက်သွယ်နိုင်ရန် "ဖြေရှင်းချက်ရှာရန်" သို့မဟုတ် "ဆက်သွယ်ရန်"။ ပိုမိုလွယ်ကူပထမဦးဆုံးဂျနှင့်အတူအလုပ်လုပ်ရန်။
သငျသညျ Tab နှစ်ခုရှိပါလိမ့်မည်ဘယ်မှာစာမျက်နှာကိုဖွင်လိမ့်မယ် - "ကုန်ပစ္စည်းသတင်းအချက်အလက်" နှင့် "ဟုအဆိုပါနည်းပညာပံ့ပိုးမှုနှင့်အတူဆက်သွယ်ရေး"။ ပုံမှန်အားဖြင့်ပထမဦးဆုံးဖွင့်လှစ်, သင်အဆုံးစွန်သောရှေးခယျြဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အခုဆိုရင်ကျနော်တို့ကနည်းပညာပံ့ပိုးမှုကြောင့်တစ်ဦး option ကိုရွေးချယ်ဖို့ရှိသည်။ အမြန်ဆုံးနည်းလမ်းအဆိုပြုထားနံပါတ်များကိုပဌနာဖို့, ဒါပေမယ့်သင်ကဖုန်းခေါ်ရန်ဖြစ်နိုင်သမျှသောနဲ့အတူသင့်ရဲ့ဖုန်းကိုမရှိဘူးသည်မှန်လျှင်, အခြားရွေးချယ်စရာနည်းလမ်းများကိုအသုံးပြုနိုင်သည်ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာညာဘက် option ကိုရွေးချယ်ဖို့အကြံပြုသည် "e-mail",ယင်းဂျအတွက်အမျှ "Chat" သငျသညျအမြားဆုံးဖွယ်ရှိ bot, ပြီးတော့ညွှန်ကြားချက်ကိုပေးပို့ဖို့အီလက်ထရောနစ် box ကိုတောင်းပါလိမ့်မယ်။
သင်ရွေးချယ်လိုလျှင် "e-mail",ထိုအခါသင်မေးခွန်းတစ်ခုကိုအမျိုးအစားကိုသတ်မှတ်ဘယ်မှာအသစ်တခုစာမကျြနှာမှလွှဲပြောင်းမည်ဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, "နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ".
ဤကိစ်စတှငျပုံစံအနီရောင်ခရေပွင့နှင့်အတူမှတ်သားထားတဲ့သောသူအပေါင်းတို့သည်နယ်ပယ်များတွင်ဖြည့်ရန်လိုအပ်သည်။ ဒါဟာသိပ်တစ်ခုကိုဖြည့်ဖို့ကောင်းတဲ့လိမ့်မယ်, ဖြစ်နိုင်သမျှ, ဒါကြောင့်အပိုဆောင်းလယ်ကွင်းသလောက်သတင်းအချက်အလက်တွေပေးနှစ်လိုဖွယ်ဖြစ်ပါသည်။ နည်းပညာဆိုင်ရာဖို့မက်ဆေ့ခ်ျကိုခုနှစ်တွင်အခြေအနေကိုအရှိဆုံးအသေးစိတ်ဖော်ပြချက်ထောက်ခံပါတယ်။
အဖြေကိုမျှော်လင့်။ အများအားဖြင့်သင်ရုံ access ကိုပြန်လည်နာလန်ထူအပေါ်ညွှန်ကြားချက်သို့မဟုတ်ထောက်ခံချက်ပေးပေမယ့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်မဆိုရှင်းလင်းထားသည့်မေးခွန်းများကိုမေးမြန်းနိုင်ပါသည်။
Method ကို 3: အထူးကိရိယာကိုအသုံးပြုခြင်း
ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သငျသညျအများအားဖြင့်တစ်ဦး charger နဲ့ကို bundle ကြွလာတော်မူသောသင်၏ဖုန်းများအတွက်ကွန်ပျူတာနှင့် USB-Adapter ကိုလိုအပ်ပါတယ်။ ထို့အပြင်ခုနှစ်, ဒီနည်းလမ်းကိုအနည်းငယ်ခြွင်းချက်နှင့်အတူအားလုံးနီးပါးစမတ်ဖုန်းများအတွက်သင့်လျော်သည်။
ညွှန်ကြားချက် ADB က Run ကို၏သာဓကအားဖြင့်ထည့်သွင်းစဉ်းစားလိမ့်မည်:
ယင်း utility ကို Download လုပ်ပြီး Install လုပ်ပါ။ ဖြစ်စဉ်ကိုစံသာခလုတ်နှိပ်နေသည် "Next ကို" နှင့် "ပြီးပြီ".
အားလုံးလုပ်ဆောင်ချက်အတွက်ထွက်သယ်ဆောင်ပါလိမ့်မည် "Prompt ကိုဆင့်ဆို"ဒါပေမယ့်အဖွဲ့အလုပ်လုပ်ခဲ့, သင် ADB က Run ကို install လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ပေါင်းစပ်အသုံးပြုနိုင်သည် ဦးဝင်း + R ကိုပေါ်လာပြတင်းပေါက်ဝင်cmd.
အခုဆိုရင် (အပေါငျးတို့သ Indent နှင့်အပိုဒ်စောင့်ကြည့်) ကဤနေရာတွင်တင်ပြထားတဲ့အတွက်ပုံစံအတွက်အောက်ပါ Command ရိုက်ထည့်ပါ:
update ကို system ကို set ကိုတနျဖိုး =0ဘယ်မှာနာမကိုအမှီ = "lock_pattern_autolock";
=0ဘယ်မှာနာမကိုအမှီ = "lockscreen.lockedoutpermanently" update ကို system ကို set ကိုတန်ဖိုး,
သင့်ရဲ့ဖုန်းကို reboot ။ သငျသညျအကြာတွင်အသုံးပြုလိမ့်မည်တဲ့စကားဝှက်အသစ်ရိုက်ထည့်ရပါမယ်ဘယ်မှာတဲ့အခါမှာအထူးဒိုးကိုပေါ်လာလိမ့်မည်။
Method ကို 4: အသုံးပြုသူဦးစားပေးကိုဖျက်မည်
ဤနည်းလမ်းကိုဖုန်းများနှင့် tablet များ (Android ပေါ်မှာ run နေ) ၏အားလုံးမော်ဒယ်များများအတွက်စွယ်စုံများနှင့်သင့်လျော်သည်။ သို့သော်သိသာအားနည်းချက်ရှိပါတယ် - သင်ဖြစ်ပွားမှု၏ 90% အတွက်စက်ရုံဖို့ settings ကို reset အခါ, သင့်ရဲ့ဖုန်းပေါ်မှာသင်၏ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအချက်အလက်များ၏အားလုံးဖယ်ရှား, ဒါကြောင့်သာအများဆုံးအစွန်းရောက်ကိစ္စများတွင်အသုံးပြုရန်အတွက်ပိုကောင်းတဲ့လမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒေတာအများစုဟာပွနျလညျထူထောငျမရနိုငျသညျ, သငျသညျ၏အခြားအစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ်ပြန်လည်ဖေါ်ထုတ်ရန်အချိန်ကြာမြင့်စွာရပါလိမ့်မယ်။
အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းအများဆုံး device များအတွက်ခြေလှမ်းညွှန်ကြားချက်အားဖြင့်အဆင့်ဖြစ်ပါသည်:
သင့်ရဲ့ဖုန်း / Tablet ကို (အချို့မော်ဒယ်များဒီအဆင့်ကိုကျော်သွားလို့ရပါတယ်) ပိတ်ထားပါ။
အခုတော့တစ်ချိန်တည်းမှာပါဝါခလုတ်ကိုနဲ့ volume up / down ချကိုင်ထားပါ။ ယင်းယူနစ်များအတွက်မှတ်တမ်းတင်သင် button ကိုနှိပ်ဖို့လိုအပ်အတိအကျအဘယ်အရာကိုအသေးစိတ်၌ရေးထားလျက်ရှိ၏ရပါမည်, ဒါပေမယ့်ပိုပြီးမကြာခဏကအသံအတိုးအကျယ်ခလုတ်များ၏ထို့အပြင်ဖြစ်ပါတယ်။
နေသမျှကာလပတ်လုံး device ကိုတုန်ခါမှုနှင့်မျက်နှာပြင်တစ်ခုက Android စက်ရုပ်သို့မဟုတ်ကိရိယာထုတ်လုပ်သူကိုမမွငျပါမညျကဲ့သို့သူတို့ကိုတက်ထားပါ။
PC များအတွက် BIOS ကိုဆင်တူ boot menu ကို။ စီမံခန့်ခွဲမှုပမာဏပြောင်းလဲမှုခလုတ် (တက် scrolling သို့မဟုတ်ဆင်း) ကို အသုံးပြု. ထွက်သယ်ဆောင်နှင့် (ကို item ရွေးချယ်ရေး / Confirm တာဝန်ရှိသည်) ခလုတ်ကိုဖွင့်သည်။ Locate နှင့်ကို select ခေါ် "Wipe Data / factory reset"။ အဆိုပါကွဲပြားခြားနားသောမော်ဒယ်များနှင့်ဗားရှင်း, ထို operating system ကို၏အမည်ကိုအနည်းငယ်ကွဲပြားစေခြင်းငှါ, ဒါပေမယ့်အဓိပ္ပာယ်အတူတူပင်ရှိနေဆဲဖြစ်သည်။
အခုတော့ကို select "ဟုတ်ကဲ့ - အားလုံး user data ကို delete".
ယခုသင်တို့ကိုရွေးပါရန်လိုအပ်ပါတယ်ရှိရာကနဦး menu ကိုမှခေါ်ဆောင်သွားပါလိမ့်မည် "ယခု Reboot system ကို"။ အဆိုပါ device ကိုသင့်ရဲ့ဒေတာများအားလုံးကိုဖျက်ပစ်, reboot ပါလိမ့်မယ်, ဒါပေမယ့်သူတို့နှင့်အတူစကားဝှက်ကိုဖယ်ရှားပစ်မည်။
ဒါဟာအမှန်တကယ်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်ဖြစ်ပါသည်, ဖုန်းပေါ်မှာသောစကားဝှက်ကိုဖယ်ရှားပါ။ သို့သော်သင်စက်ပစ္စည်းတွင်နေထိုင်သောဒေတာများမထိခိုက်စေဘဲဒီတာဝန်ကိုကိုင်တွယ်နိုင်သည်ကိုသေချာမသိကြလျှင်, အကူအညီနဲ့များအတွက်အရည်အချင်းပြည့်မီဝန်ဆောင်မှုစင်တာကိုဆက်သွယ်တာကအကောင်းဆုံးဖြစ်တယ်, ဘယ်နေရာမှာသင်ကသေးငယ်တဲ့အခကြေးငွေအဘို့, ဖုန်းပေါ်မှာဘာမှမထိခိုက်စေဘဲ, စကားဝှက်ကို reset ။
ဗီဒီယို Watch: သၾကန လကရစငသခငမ - Myanmar DJ Remix Thingyan Song သၾကနသခငမ (အောက်တိုဘာလ 2019).